Dagaal ka socda Xaafado ka mid ah magaalada Muqdisho
Muqdisho:-Ciidanka AMISOM iyo kuwa DFKM ayaa saaka waxaa ay weerar ku qaadeen fariisamo difaac oo ay ciidanka ururka Al-shabaab ay ku lahaayeen jidka isku xirta magalaada Muqdisho iyo Balcad , dagaalka saaka ayaa ciidanka AMISOM waxaa ay is ticmaaleen Taangiyo iyo madaafiic culus iyadoo ciidanka Al-shabaab uu dagaalkoodu ahaa mid dhuumaalaysi ah oo ay xabada ka soo ridayeen jiha walba.
Ciidanka AMISOM oo wata Taangiyo iyo kuwa DFKM ayaa ku soo fiday lana wareegay Warshada Baastada iyo wadada isku xirta magaalada Muqdisho iyo Shabeellada Hoose. Sarkaal u hadlay ciidanka DFKM ayaa saxaafad u sheegay in ciidankooda ay la wareegeen Soos, Suuqa Xoollaha iyo gabi ahaan degmada Huriwaa.
Dagaalka saaka ayaa waxaa lagu arkay Shiikh Xassan Daahir Aweys oo hogaaminaya dagaalka iyadoo dagaalka saaka uu yahay mid culus ciidanka Al-shabaabna ay gurmad badan soo geliyeen farumaha dagaalka.
Dagaalka saaka ayaa ciidanka Al-shabaab waxaa ay sheegteen in ay hal Taangi ka gubeen ciidanka AMISOM iyagoo ku qasbay in Taangiyadoodu dib uga noqaan goobaha dagaalka , dirirta ayaa ah mid xooggan ilaa hadda khasaaraha kala gaaray lama garan karo balse saacadaha soo socda baan idiin soo gudbin doonaa warka oo faahfaahsan.